Izixhumanisi zangaphakathi zilungile kwezinye izinto, kodwa hhayi ukuthuthukisa isayithi lakho! -SEO By The Expert From Semalt, Natalia Khachaturyan
Izixhumanisi zangaphakathi zibalulekile ekusizeni abasebenzisi ukuba bahambe kusuka ekhasini elilodwa lewebhusayithi kwenye. Badlala indima ebalulekile ekunikezeni isipiliyoni somsebenzisi obumbene. Lezi zixhumanisi zisebenza ngezinhloso ezimbili eziyinhloko ku injini yokusesha nokwenza ngcono (SEO). Okokuqala, izixhumanisi zangaphakathi zinomthwalo wokusiza inqubo yezinjini zokusesha ukuthola amakhasi kuwebhusayithi yakho. Futhi, ikhwalithi yezixhumanisi emakhasini akho asiza ekusekeni ikhasi lakho. Inombolo yezingqinamba zangaphakathi zekhwalithi eziqondisa ekhasini inikeza izinjini zokusesha isignali yokuthi ikhasi lifanele kangakanani.
Isikhali Sokuqukethwe kusuka ku Semalt , uNatalika Khachaturyan, uchaza ukuthi izixhumanisi zangaphakathi zivela ekhasini elilodwa ziye kwenye isizinda zikusiza ukuba uhlole isayithi. Futhi banesibopho sokusungula ubukhosi ngokubaluleka kokwaziswa okubanjwe kuwebhusayithi enikeziwe. Lokhu kusiza ekusabalaleni amandla asezingeni elizungeze isayithi.
Ngezinga eliphezulu le-SEO, izinjini zokusesha zidinga ukubona okuqukethwe kanye nekhwalithi yamagama angukhiye nokuthi zisetshenziswe kanjani. Ukuze wenze izinto zibe lula, injini yokusesha izodinga isakhiwo esixhumanisayo esiyinkimbinkimbi esisiza ukuthi sidlulise amehlo ezindleleni zesayithi ukuthola wonke amakhasi ewebhusayithi. Iphutha elibi kunawo wonke amawebhusayithi amaningi enza ukufihla isixhumanisi esiyinhloko noma ukuwafaka ngendlela engayifinyelele ngayo injini yokusesha. Lokhu kuvimbela amakhasi ukuba abhalwe ohlwini lwama-indices yokusesha. Amakhasi angase abe nokuqukethwe okuhle kakhulu namagama angukhiye, kepha i-Google ngeke ibabone, ngakho-ke, ngeke ibe negalelo ekuhlelweni kwesayithi lakho.
Isakhiwo sewebhu esihle kakhulu sinombolo encane yezixhumanisi ekhasini eliyisiqalo namakhasi eminye. Lokhu kuvumela amandla okubeka amandla ukuba abe nokugeleza okubushelelezi kulo lonke isayithi elikhuphula ukukwazi ukukala konke ikhasi.Ukufeza lokhu, udinga ukusebenzisa izakhiwo ze-URL ezengeziwe kanye nezixhumanisi zangaphakathi. Le fomethi iyaqondakala kuzinjini zokusesha njengoba kulula ukuyilandela.Isicabucabu se-injini yokusesha sibeka wonke amakhasi ukuze siwalungiselele ukubeka. izizathu zokuthi kungani amanye amakhasi angenakufinyeleleka ngakho angafakwa indexed okubandakanya:
Lezi zingase zibe nezakhi eziyisisekelo ezifana nemenyu yokudonsa noma ucwaningo olugcwele. Lezi fomu zingalimaza isicabucabu sokusesha ekufinyeleleni izixhumanisi noma okuqukethwe okwenza zingabonakali ezinjini zokusesha.
Izixhumanisi ezingatholakala kuphela ngebhokisi lokusesha langaphakathi
Isigubhu asikwazi ukuthola okuqukethwe okufihliwe ngemuva kwezindonga zangaphakathi zebhokisi lokusesha, ngakho-ke, amakhasi anjalo ngeke abekwe indexed.
Lezi zixhumanisi azitholakali yizinjini zokusesha.
Uma amakhasi evinjiwe nge-robot.txt noma i-Meta robots tag
Amathegi we-robot ye-Meta ne-robot.txt avimbela isicabucabu ukuba singene ekhasini elithile.
Izixhumanisi ezisemakhasini anezixhumanisi eziningi
Lokhu kuzonciphisa umkhawulo wokukhawulela wezinjini zokusesha. Ngakho-ke, kuwukuhlakanipha ukuqiniseka ukuthi ikhasi ngalinye linamakhasi angaphezu kwangu-150 ngaphandle kwalokho uzovimbela amanye amakhasi ukuba akhishwe.
Ukugwema izimo ezikhulunywe ngazo kunciphisa ikhono le-spider yokusesha ukuze likhishwe kuzo zonke amakhasi ezivumela ukuba zibe yi-index ye-SEO. Qiniseka ukuthi uhlolisisa lezi zici uma udala izixhumanisi zangaphakathi.